KISSmetrics dia mamoaka tatitra momba ny làlana tena manambara | Martech Zone
KISSmetrics dia mamoaka tatitra momba ny làlana tena manambara
Alarobia, Oktobra 22, 2014 Douglas Karr
Toa ny ekipa hatrany KISSmetrics dia dingana iray alohan'ny fihodinana ary mety nanao izany indray izy ireo niaraka tamin'ity fanampiana ity. Raha nanokatra ny tatitra momba ny Google Analytics ianao, dia mahazo angona mahaliana momba ny fahatongavan'ny olona sy ny fialany amin'ny tranokalanao ary koa ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fifamoivoizana… fa tsy tena fantatrao ny làlana alehan'ny olona.
Manana mpanjifa isika amin'izao fotoana izao izay nanome fanazavana momba ny vinavinan'olona iray izay nitsidika am-polony am-polony ny tranokalan'izy ireo ary efa nitety pejy 40 mahery ... Ampitomboy mpitsidika an'arivony io hetsika io ary lasa tsy ho vita mihitsy.
Ahoana raha afaka mamantatra ny pejy fandraisana rehetra an'ny tranokalanao ianao ary avy eo dia mijery tatitra tsotra iray izay mampiseho ny làlan'ny olona namakivaky ny tranokalanao… angamba avy amin'ny pejy fitobiana, hatramin'ny fijerena horonan-tsary, hatramin'ny pejy iray amin'ny vidiny, hatramin'ny fiovam-po. Ny famakafakana sy ny fahazoana ny dingana raisin'ny olona dia afaka manampy anao hanatsotra ireo làlana ireo, angamba manangona ny sasany amin'ireo atiny, ary manome pejy iray tsy misy valiny izay mamaly ireo fanontaniana rehetra ilaina.
Ity misy fomba fijery ny Tatitry ny làlana KISSmetrics, azonao atao ny manindry azy mba haka azy io ho fizahan-toetra:
Tags: lalan'ny fiovam-pokissmetricstatitra momba ny làlanalalana mankany amin'ny fiankohofana
Ity ny antony mankahalan'ny olona ny atiny